RGB / Jiro maro loko
Fampidinana video Operation
Fianarana tsy maintsy atao amin'ny sary fampidirana sary: ​​teknika sy fomba
Raha ampitahaina amin'ny fampiasana taratra taratra, ny hazavana feno naoty matihanina dia afaka mifehy tanteraka ny fivoahan'ny herinaratra sy ny zoro (eny fa na ny loko aza), ary manana fihetsika avo lenta kokoa. Ampifanaraho fotsiny ny herin'ny hazavana fenoy mba hanovana ny tsy fitovizan'ny aloka, ny fisongadinana ary ny midtone Mbola mila manomboka ianao amin'ny alàlan'ny fametrahana t ...Hamaky bebe kokoa »
Fa maninona no mila mpamorona jiro matihanina ny jiro studio?
Ny jiro studio dia ampahany lehibe amin'ny rafitry ny studio. Ny jiro studio dia mamaritra ny sary sy ny vokatry ny fitifirana an'ireo mpilalao. Drafitra famolavolana jiro studio tsara dia hanaingo ny sarin'ny toetra amam-panahy, hahafahan'ny mpampiantrano mahazo endrika mendrika, tsara tarehy sy malala-tanana ...Hamaky bebe kokoa »
Fomba maro hampiasana jiro studio
Loharano hazavana lehibe Ny hazavana lehibe no hazavana lehibe manazava ny maodely amin'ny sary fakana sary an'ny studio ary mamolavola ny sarin'ny toetra amam-panahy. Ny jiro lehibe dia mamaritra ny fizarana ireo faritra mamiratra sy maizina amin'ny toetrany iray manontolo. Na hazavana malefaka io na hazavana mafy, ny tena ...Hamaky bebe kokoa »
Fampivoarana jiro LED
Amin'izao fotoana izao, ny rafitra fanaraha-maso jiro dia miha mandeha ho azy ary manan-tsaina. Miroborobo ny trano maoderina sy ny fitaovana matanjaka ankehitriny. Ireo vokatra manan-tsaina dia mipoitra tsy misy farany. Ny fiainana hendry aseho amin'ny mpanjifa faobe dia miditra tsimoramora ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny jiro LED. U ...Hamaky bebe kokoa »
Torohevitra hividianana jiro LED ho an'ny horonan-tsary
Ny jiro LED dia mazava, mahomby amin'ny alàlan'ny angovo hafa amin'ny jiro mahazatra. Ny jiro LED dia tsy dia tsara loatra handrehitra ny tranonao; tsara ho an'ny jiro horonan-tsary koa izy ireo. Na dia tsara toa azy ireo aza dia misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao alohan'ny lany sy mividy LED. Th ...Hamaky bebe kokoa »
SOSO-DOHA HEVITRA MANERITRERA MIFIDIANA NY Jiro STUDIO
Tokony ho fantatrao hoe firy ny jiro ilainao ny famonoana ireo karazana jiro, hofongarantsika ny fomba hamaritana ny isan'ny jiro apetraka. Araka ny hitanao voatonona ao anatin'ity torolàlana ity, ireo fanapahan-kevitra rehetra ireo dia tonga amin'ny farany izay mety indrindra amin'ny famokaranao. Mampiasa o ...Hamaky bebe kokoa »
Ny jiro dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny famokarana horonantsary. Raha mitifitra zavatra toy ny tatitra vaovao ianao ary mijery sary izay maizimaizina loatra na manjelanjelatra loatra ny mpijery dia manelingelina ny mpihaino fotsiny ianao fa tsy misarika azy ireo hiditra amin'ilay tantara novakiana na dia ...Hamaky bebe kokoa »
Mampianatra anao handamina jiro studio
Ny fomba fametrahana jiro dia ampahany lehibe amin'ny jiro studio. Ny studio dia manana fepetra takiana amin'ny jiro mandritra ny fotoana fitifirana. Ny injeniera jiro matihanina dia afaka manala sy manaingo ny jiro mba hahitana vokatra tsara kokoa. Androany, hampahafantariko anao ny momba ny jiro a ...Hamaky bebe kokoa »
NY FOMBA AZAFIN'NY Jiro dia misy vokany eo amin'ny firaketana an-tsary
Raha resaka famokarana horonantsary, ny jiro dia manan-danja mitovy amin'ny fifantohan'ny feo sy ny fakan-tsary. Raha tsy manokana fotoana hametrahana araka ny tokony ho izy ny fitaovanao ianao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny vokatra farany. Ny fahafantarana ny fiantraikan'ny jiro amin'ny fandraisam-peo dia hanampy anao ...Hamaky bebe kokoa »
TERAKA farany NEWS
Fianarana tsy maintsy atao amin'ny seranan-tsambo fampidirana ...
Raha ampitahaina amin'ny fampiasana taratra taratra, ny hazavana feno naoty matihanina dia afaka mifehy tanteraka ny herin'ny ...
Fa maninona no mila profesio ny jiro studio ...
Ny jiro studio dia ampahany lehibe amin'ny rafitry ny studio. Ny jiro studio dia mamaritra ny ...
Loharano hazavana lehibe Ny jiro lehibe no jiro lehibe manazava ny maodely amin'ny sary studio ...
Amin'izao fotoana izao, ny rafitra fanaraha-maso jiro dia miha mandeha ho azy ary manan-tsaina. Smart ho ...
Ny jiro LED dia mazava, mahomby amin'ny alàlan'ny angovo hafa amin'ny jiro mahazatra. L ...
Jiro fenoy peratra, Light Light ho an'ny firaketana horonantsary, Jiro selfie ho an'ny telefaona, Fenoy ny hazavana, Selfie taratra selfie taratra, Rgb nitondra jiro krismasy,